बरिष्ठ अभिवक्ता शिवप्रसाद सिग्ेदल -
वैदेशिक रोजगारीमा जिउँदै जाने युवाहरुको शव यसरी बाकसमा बन्द भएर आइरहेका छन् । दैनिक ९ देखि २४ वटासम्म शवका बाकस आउने एयरपोर्टका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । युवाहरु अकालमा किन विदेशमा मरिरहेछन्, तिनको ज्यान जानुको कारण प्राकृतिक हो कि अप्राकृतिक ? यस बारेमा तिनले पठाएको रेमिटान्सले सरकार चलाउनहरु यो मुद्दा बारेमा किन जानकारी लिदैनन्, मृत्यु किन भइरहेको छ भनेर छानबिन गर्दैनन् ?
यी लाशको बक्सा हुन् । यस्ता बक्सा खाडी मुलुकहरुबाट आउने प्रत्येक जहाजले बोकेर आउने गरेका छन् र आफन्तजन एयरपोर्ट पुगेर प्रक्रिया पूरा गर्छन र लाश बुझ्छन् । सरकार लाश आउने क्रमबारे कुनै चासो राख्दैन । किन लाश आइरहेका छन् ? किन प्रत्येक दिन लाश आउँछन् ? यसरी युवाको लाश आउनुको कारण के हो, यसको निदान के हुनसक्छ ? सरकार पटक्कै वास्ता गर्दैन । मनलागेर युवा गए, तिनको लाश आयो त के गर्नु ? यस्तै विचार राख्छ संवेदनहीन सरकार । युवाहरु यो सव देखिरहेका छन् र पनि वैदेशिक रोजगारीमा दिनहुँ हुत्तिरहेका छन् । के गर्नु, काम नभएपछि जानै पर्‍यो । युवाहरु विदेश पलायन हुने वाध्यतामा छन् । यो वाध्यता कम गर्न सरकार तैयार छैन, राजनीतिक दलहरुसँग कुनै उपाय छैन । दैनिक हजारौं युवायुवती गइरहेका छन् ।
कामका लागि खाडी मुलुक जाने युवायुवतीको लाश यसै गरेर आउने गरेको छ, एयरपोर्टको कार्गो सेक्सनमा । पैसा कमाउला, सुखसँग बसौंला, परिवारलाई सुख दिउँला भन्ने सपना बोकेर जाने युवाहरु दिनभर ४६ डिग्रीको चर्को घाममा काम गर्छन् र रात परेपछि एसीको चिसोमा सुत्छन् । दिनभरको थकाई मार्न ठाडो घाँटी पनि लगाउँछन् । चिसो र तातोको संयोजन शरीरले धान्न नसकेपछि कतिपय युवाहरु ओछ्यानबाट उठ्दै उठ्दैनन् । कति दुर्घटनामा पर्छन् ।
कति युवती उतै मरेका छन्, कति मानसिक सन्तुलन गुमाएर बहुलाई बनेर एयरपोर्टमा उत्रिने गरेका छन् । कतिपय युवाहरु रुँदै आउँछन् । कतिपय उतैका जेलतिर, उतैका सास्ती खाएर मृत्यु कुरिरहेका छन् । कतिपय युवाले हण्डर र ठक्करमात्र खाइरहेका छन् । केहीले राम्रो काम पाएका छन्, राम्रो कमाएका छन् । तर यो युवाशक्तिलाई नेपालमै रोजगारी सिर्जना थाल्ने कहिले ?